Soundtrap: Gadzira Yako Guest-Inotungamirwa Podcast Mugore | Martech Zone
Kana iwe wakamboda kugadzira podcast uye kuunza vaenzi pa, iwe unoziva kuoma kwazvinogona kuve. Ini parizvino ndinoshandisa Zoom kuita izvi sezvo ivo vachipa iyo yakawanda-track sarudzo kana ndichinyora… ndichiona kuti ndinokwanisa kugadzirisa panzira yemunhu mumwe nemumwe zvakazvimirira. Izvo zvichiri kuda kuti ini ndipinze maturu edhiyo uye ndinoasanganisa mukati meGarageband, zvakadaro.
Nhasi ndanga ndichitaura kune wandaishanda naye Paul Chaney uye akagovana chishandiso chitsva neni, Soundtrap. Soundtrap ipuratifomu yepamhepo yekugadzirisa, kusanganisa, uye kubatana paodhiyo- ingave mimhanzi, kutaura nyaya, kana chero imwe mhando yekurekodha odhiyo.
Soundtrap yeVatengesi Venyaya
Soundtrap mhinduro yegore kwaunogona kunyora podcast yako, kukoka vashanyi zviri nyore, kugadzirisa ako podcast, uye kuashambadzira ese pasina kurodha pasi nekushanda kunze.
Soundtrap Podcast Studio Zvimiro
Iyo chikuva ine desktop desktop inopa zvimwe zveizvi zvimwe zvinowedzerwa.
Rongedza podcast yako kuburikidza nechinyorwa - Iyo Soundtrap desktop chikuva ine yakajairika edhita asi ivo vawedzera otomatiki zvinyorwa - chinhu chine hunyanzvi chinhu kuti zviite kuti zvive nyore kugadzirisa podcast yako sezvaungaita rugwaro rwekunyora.
Koka uye nyora podcast vashanyi - Nekuti kubatana kwaive kwakakosha pakugadzira Soundtrap, unogona kukoka vashanyi vako kumusangano wekurekodha nekungovatumira link. Kana vangopinda, unogona kuvabatsira nekumisikidza odhiyo yavo uye zvakarekodha kunogona kutanga! Ivo havadi kusaina kuti vakoke.
Isa odhiyo uye zvinyorwa kuSpotify - Ichi ndicho choga chishandiso chinokutendera kuti uise ese maPodcast uye zvinyorwa zvakananga kuSpotify, zvinowedzera kuwanikwa kwepodcast yako.
Wedzera mimhanzi uye mhedzisiro - Gadzira yako jingle uye pedzisa yako kugadzirwa nezwi mhedzisiro kubva Chikare.org zviwanikwa zvekuteerera.
Tanga yako yemahara-yemwedzi-kuyedzwa kweye Soundtrap
Tags: audio yekudyidzanaodhiyo yekugadzirisaodhiyo edhisheniedit odhiyomuenzi podcastPodcastpodcast mupepetipodcast jinglepodcast kudhindwasaasmanzwirosoundtrapspotifyvatori venhau